प्रचण्डले बुझ्नु पनि पर्‍यो - साप्ताहिक
प्रचण्डले बुझ्नु पनि पर्‍यो
होइन कस्तो बुद्धि हो (अपराध स् युवाहरूको ग्याङ फाइटमा एकको मृत्यु) ? किन झगडा गर्छन् युवाहरू रु त्यो पनि केटीका नाममा ?
नेपाली भएर पहिले आफ्नो देशमा प्रमाणित गरेर त देखाऊ (मनोरन्जन : मेरो लक्ष्य बलिउड हो) । यो क्षेत्रमा कति आए, कति गए । छोरो पाउनु कहिले, कन्दनी बाट्ने अहिले भनेजस्तो फुर्ती नलगाआंै न ।
समसामयिक विषयमा सभ्य भाषा प्रयोग गरी सुझाव स्वरूप टीकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविक हो (केवल एक प्रश्न : सामाजिक सञ्जालमा राजनैतिक टीकाटिप्पणी कत्तिको उचित ?), तर यहाँ त आफूले भोट हालेको पार्टीको बचाउ गर्दै साथीहरू तथानाम गाली गर्छन् र पो नरमाइलो लाग्छ ।
शुक्र चाम्लिङ राई
मेची कलेजमा स्नातक पढ्दाको सम्झना आयो (प्रतियोगिता : अमेरिकामा शरणार्थी भुटानीहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता) । भुटानी शरणार्थीहरूमा इमान्दारिता र सीप छ ।
खुसी लाग्छ (समाचार : सुशान्तले थर्काए भारतीय डान्स रियालिटी शो) र दु:खी पनि हुन्छु । नेपालमै यस्तो प्लेटफर्म भैदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ? यहाँ त कला देखाउन पनि बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा कलाको सम्मान छैन । जे होस्, सुशान्त प्रतिभावान् र मेहनती रहेछन् ।
सुवास लामा मोक्तान
मेकअप टिप्सहरू पढ्न नपाउँदा साप्ताहिक हेर्नै झ्याउ लाग्छ । यसलाई निरन्तरता दिइयोस् ।
म अनुप दाइको फ्यान हुँ, तर एउटा गुनासो सधैं छ, किन उहाँलाई सधै नकारात्मक भूमिकामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ ?
कुशल पत्रकारिताको खराब नतिजा (गसिप : बाल यौन दुराचारी) । यस्तो शीर्षकले पत्रिका त बिक्ला तर पाठकहरूको विश्वास घट्यो भने के गर्ने ?
यस्तो कुरा प्रचण्डले बुझ्नु पनि पर्‍यो नि (गजुरियल : प्रमज्यू, बिस्तारै जानोस्, अगाडि खाल्डैखाल्डा छन्) । कुरा त सही हो । शब्दको मीठो झापड दिनु भएछ । खुसी लाग्यो ।
दिल राई, दिप गैरे नेपाली, सूर्य गैरे